Inkinga yama-Tribbles ... er ... Amawijethi | Martech Zone
Namuhla ngidle isidlo sasemini nethimba lethu emsebenzini futhi saxoxa ngobuchwepheshe bewijethi. Angiyena umlandeli wamawijethi ukuthembeka. Ngikholwa ukuthi bavame ukwehlukanisa ukuqhubeka kwemidwebo yebhulogi, bahlanganise amanye amabhulogi, futhi bavame ukwakhelwa ukuzinaka bona hhayi iwebhusayithi.
Noma ngabe uyangeza amawijethi or amagajethi kubhulogi yakho, iwebhusayithi yakho, ikhasi lakho le-iGoogle noma ideskithophu yakho… amawijethi kufanele akwenze kube lula ukuhlanganisa ngaphandle kwesidingo sokuhlela. Mane unamathisele ikhodi noma landa iwijethi bese uyahamba.
Umthombo wami engiwuthandayo wokuhlola amawijethi ngu Mashable, kepha angizitholi ngiwafaka kaningi. Ngihlala ngifunisisa inzuzo kubafundi bami - futhi empeleni angiyitholi. Mhlawumbe bengizofaka amawijethi uma kunenzuzo yenjini yokusesha, kepha iningi lamawijethi lilayisha ohlangothini lwamakhasimende nemininingwane eqoqiwe ayikaze ibonwe yi-bot yenjini yokusesha.
Enye inkinga ngamawijethi ukuthi isiqeshana esisodwa asihambelani konke. Iwijethi ekahle evela kumbono womdali akuyona iwijethi efanelekayo ngokombono womsebenzisi. Ngikubona lokhu kaninginingi… Angikwazi ukumisa isitayela sewijethi ukufanisa ukusetshenziswa nokuhleleka kwewebhusayithi yami. Ukuhlanzeka inokulandela okukhulu njengomholi kuwijethi… inikezela ngokuhlukile analytics nokulandelela kumawijethi.
Angiqiniseki ukuthi ngake ngabona inani lebhizinisi, noma kunjalo! Ngijwayele ukudonsela ngakuye ukuhlanganiswa ngama-API njengoba ngikwazi ukufanisa ukubukeka nokuzizwa kwesiza sami, ngeza okunye ukusebenza okwengeziwe, futhi mhlawumbe ngisebenzise ubuhle benye injini yokusesha.
Okwe Isoftware njengengxenyekazi yokubhuloga yesevisi njenge-Compendium, kunezinzuzo kumawijethi, noma kunjalo. Njengoba amawijethi alayisha futhi agijimela iklayenti hhayi kuseva, awubeki uhlelo lonke engcupheni uma othile ehlanganisa inqwaba yezidlakela. Futhi, ukungalungi kwe-SEO empeleni kuphenduka izinzuzo zohlelo lokusebenza oluqine kakhulu ngokombono Wokusetshenziswa Kwezinjini Zokucinga. Amawijethi ngeke anciphise ubuhle benjini yakho yokusesha.
Uma amaklayenti ethu efisa ukuhlanganisa ikhasi lawo, kungenzeka azolimaza amazinga awo okuguqulwa (abantu abachofoza ocingweni lokwenza isenzo esishayela ibhizinisi), ngakho-ke sixwayisa ngabo. Sithembele empumelelweni yamakhasimende ethu ngakho-ke siyazikhandla ukuze zihambisane nemikhuba emihle yokuthengisa online.
Ingabe usebenzisa amawijethi? Ngingathanda ukuzwa ukuthi hlobo luni lwemiphumela yebhizinisi oyitholayo.
Tags: 20122012 mobileI-inthanethi ephathekayo ka-2012design infographicsukufakwa kwenombolo yefoni okunamandlainternet mobileUkulandela ngomkhondo ucingoamathiphu ezokuxhumana nabantuumabhebhanaI-wordpress login
Nov 26, 2008 ngo-12: 22 PM
Nginawe Doug. Ngifuna kakhulu ukuthanda amawijethi kepha ahlala engishiya ngifuna okungaphezulu. Ngifuna ukungena ngaphakathi kwazo, ngiziguqule, ngiziqondanise nesiza sami futhi angisoze ngakwazi. Ngakho-ke ngihlala ngisebenzisa ukubhala amakhodi kanzima nokwakha ngesandla konke. Mhlawumbe ngimane ngiwumuntu owanele ukuze nganeliseke engikutholayo ngokwami.
Nov 27, 2008 ngo-10: 30 AM
Ngingumfana wokuqukethwe futhi obhekele imiphumela noma ukushoda lapho kwezindawo eziyisishiyagalombili, kufaka phakathi ezami. Ngikhunjuzwa kaningi (futhi kabuhlungu!) Ngokuthi kuncane kangakanani okudingayo ukuphazamisa isivakashi. Ngokuyisisekelo, uma ubeka okuthile kusayithi lakho bekungangcono kube khona ukuze uthuthukise ngobuqotho ulwazi lomsebenzisi kanye / noma ukuhambisa abantu ekuguqukeni. Ngaphandle kwalezi zinto ezimbili bese ubeka engcupheni imigomo yebhizinisi yesayithi.